कक्षा १२ को परीक्षा भगबानको ईच्छा ! - Bidur Khabar
कक्षा १२ को परीक्षा भगबानको ईच्छा !
विदुर खबर २०७७ असोज ७ गते १०:३०
नुवाकोट । १२ कक्षाको परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने कि नहुने, अब भगबानलाई मात्र थाहा छ । सरकार वा शिक्षा मन्त्रालय केही बोल्दैन । दुई साताअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई परीक्षा सञ्चालनको मोडल र विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको विषयमा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।
समयैमा निर्णय नगर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका करिब ४ लाख २६ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ । केही विश्वविद्यालयले अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र अघि बढाइसकेको छन् । तर सरकार अनिर्णयको बन्दी बनिदिएका कारण स्थिति भगवान भरोसेमा पुगेको हो । बोर्डले घरमै अनलाइनमार्फत प्रश्नपत्र पु¥याएर (ओपनबुक), विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र (होम सेन्टर) कायम गरी ५० देखि सय विद्यार्थी राखेर १ हजार ८ सय ५० विद्यालयमा पहिलो र अन्य जिल्लामा दोस्रो र तेस्रो चरणमा र ४०–४० अंक ११ र १२ को परीक्षा र २० अंक प्रयोगातत्मक अंकभार कायम गरी परीक्षा लिनसक्ने विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसअघि विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङकनको आधारमा विद्यालयबाटै नम्बर दिएर एसईई को परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा विद्यालयको आलोचना भएका थियो । बोर्डले यो विधिबाट परीक्षा लिनै नहुने अडान राखेको छ । सो प्रस्ताव तत्काल पारित गरी जुनसुकै विकल्पबाट भएपनि परीक्षा लिने बाटो खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र सरकार र बोर्डका विरुद्धमा विद्यार्थी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अवस्था आउनसक्छ ।